Maalinta Qaranka ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee cusub ayaa ka soo dhalaali doonta Dunida Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » Maalinta Qaranka ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee cusub ayaa ka soo dhalaali doonta Dunida Dalxiiska
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Mudane, Wasiirka Dalxiiska Sucuudiga, Mudane Axmed Aqeel AlKhateeb, kaliya kuma dheesho HE Edmund Bartlett, Wasiirka Dalxiiska Jamaica. Wuxuu qoob -ka -ciyaaraya qoob -ka -ciyaarka adduunka ee dalxiiska.
Adduunku wuxuu caawimaad u eegayaa Riyaad, caawimaduna way soo socotaa.
Sacuudi Carabiya ayaa siyaabo kala duwan u dardar gelineysay inta lagu guda jiro cudurka faafa.
Maalinta Qaranka ee Maanta ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sidoo kale noqoto Maalinta Dalxiiska Qaranka ee Sacuudi Carabiya iyadoo dunidu daawaneyso.
Maalinta Qaranka Sacuudi Carabiya ayaa mar walba la xusaa Sebtember 23rd.
Waxaa loo yaqaanaa Al-Yaom-ul-Watany, waxay ku beegan tahay Sebtember 23-keedii 1932-kii, markii Boqor Cabdulcasiis ku dhawaaqay mideynta dalka oo ah boqortooyo.
Boqortooyada Sucuudiga Carabiya waxaa la aasaasay 1932 waxaa qoray Boqor Cabdulcasiis (oo reer galbeedku u yaqaan Ibnu Sacuud).
Marka qof maalmahaan wax laga waydiiyo Sucuudiga, fikradaha ku saabsan safarka iyo dalxiiska waxay la mid yihiin fikradaha saliidda iyo maalka.
Tani aad bay uga duwanayd markii hore markii boqortooyadu u furnayd oo kaliya dalxiis diimeed ama ganacsi.
Laga soo bilaabo "dalxiis la'aan", Sacuudi Carabiya waxay dib u habeyn ku sameysay "wax walba oo ku saabsan dalxiiska" maanta.
Sacuudi Carabiya kaliya ma noqonin ciyaaryahanka ugu muhiimsan gobolka ee qeybta safarka laakiin waa, shaki la'aan, mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan adduunka.
Marti gelinta xafiisyada gobolka sida UNWTO, WTTC, waddanku wuxuu ku bixiyaa balaayiin doollar si uusan u badbaadin waaxdiisa oo keliya laakiin uu u caawiyo adduunka.
Kooxda Danaha Sucuudiga ee ay Shabakada Dalxiiska Adduunka hoggaanka HRH Dr Abdulaziz Bin Naser Al Saud iyo Raed Habbis wuxuu leeyahay Kooxda Wada -hadalka WhatsApp ee ugu firfircoon oo hadda lagu arko WTN.
Sacuudi Carabiya waxay rajaynaysay inay hoy cusub u noqoto Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO). Haysashada UNWTO ee xarunteedu tahay Boqortooyada waxay hoosta ka xarriiqi doontaa heerka caalamiga ah ee hoggaamiye dalxiiska caalamiga ah ee Sacuudi Carabiya.
Marka a Dhaxal -sugaha Boqortooyada Sacuudiga iyo Ra’isul -wasaaraha Spain hadal waxay muhiim u noqon kartaa ganacsiga UNWTO inuu joojiyo hamiga Boqortooyada. UNWTO waxay xarunteedu tahay Spain, iyadoo Boqortooyada Spain siineysa boos caalami ah xagga dalxiiska, iyo kursi joogto ah oo ka tirsan Golaha Fulinta ee UNWTO.
Waxay u muuqataa wadaxaajoodyo la xiriira sidii looga baaqsan lahaa tallaabada Sacuudi Carabiya ay ku siinayso UNWTO guri cusub oo hadda socda.
Yurub, Ameerika, ama Shiinaha ayaa ka walwalsan in Sacuudi Carabiya ay xoojiso halka ay inta badan ku guuldareysteen, laakiin waxay rajo ka abuurtaa Afrika, Aasiya, xitaa Kariibiyaanka iyo gobollada kale.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Edmund Bartlett ayaa aad ugu farxay Sacuudiga, taas Mudane Axmed Aqeel AlKhateeb, Sacuudi Carabiya ayaa la arkay isagoo la cayaaraya Edmund Bartlett, Wasiirka Dalxiiska Jamaica ee dhulka Bob Marley.
Mudane Axmed Aqeel AlKhateeb, Sacuudi Carabiya oo la cayaaraya Edmund Bartlett, Wasiirka Dalxiiska Jamaica
Meelaynta caalamiga ah ee dalxiiska caalamiga ah ayaa si cad isu beddelaysa, waxaana laga yaabaa inay si aad ah ugu wareegto xagga Sacuudi Carabiya.
Ma jiro waddan kale oo adduunka ah oo muujiyey aragti caalami ah oo ku aaddan qaybtan hore. Waxaa jira wax ka badan aragtida, waxaa jira lacag, lacag badan.
Marka Sacuudi Carabiya ka soo muuqato kulan, dood, waxay noqotaa diiradda kulanka ama doodda.
Shirkii WTTC ee Cancun bishii May muuqaalka Wasiirka Sacuudigu wuxuu sababay in agaasimihii WTTC Gloria Guevara ay ka tagto shaqadii WTTC. Hadda waa lataliyaha ugu sarreeya ee wasiirka AlKhateeb, oo ku nool Riyaad, isla markaana u dabbaaldegaya Maalinta Qaranka Sucuudiga maanta isagoo haysta dhalashada Mexico.
Waxay u muuqataa inay la socoto sawirka waddan furfuran oo diyaar u ah inuu bilaabo mustaqbal ifaya oo cusub marka ay timaaddo in sumcaddiisa lagu qurxiyo suuqa adduunka.
Maanta Boqortooyadu waxay u dabaaldegtaa fasaxdeeda Qaranka - hubaalna kani waa fasax muhiimad weyn u leh waaxda socdaalka iyo dalxiiska meel kasta.
Sacuudi Carabiya ayaa midaysay afarta gobol si ay u noqoto hal dawlad iyada oo qabsashadii taxanaha ahayd ee ka bilaabantay 1902 qabsashadii Riyaad, hoygii awoowaha ee qoyskiisa, Gurigii Sucuudiga.
Sannad kasta, 23 -ka Sebtembar waxay fursad u tahay muwaadiniinta Sucuudiga inay u dabbaaldegaan hidaha dhaqankooda ayna eegaan mustaqbalka. Inta lagu jiro damaashaadka maalinta qaranka, waddooyinka dalka oo dhan waxaa ka buuxa cagaar iyo caddaan - midabada calanka Sucuudiga ee lagu sawiray farshaxanka Doodle. Muwaadiniinta ayaa la arki karaa iyagoo lagu qurxiyay midabadaas astaanta ah isla markaana calanka qaranka lagu xardhay baabuurta iyo guryaha gaarka loo leeyahay.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo hoy u ah halka uu ku dhashay Islaamka oo hadda ay ka socdaan kacdoon bulsho iyo dhaqaale oo dhallinyaro ah September 23. Hal -ku -dhigga sannadkan ee Maalinta Qaranka Sucuudiga ayaa ah “Hoy noo ah”.
Maalinta Qaranka Sacuudiga ayaa lagu xusaa cayaaraha hidaha, heesaha, iyo xafladaha dhaqanka. Waddooyinka iyo dhismayaasha waxaa lagu xardhay calanka Sucuudiga, waxayna dadku xirtaan midabada qaranka ee cagaarka iyo caddaanka ah, waxayna isla soo bandhigaan buufinnada.
Sacuudi Carabiya, si rasmi ah Boqortooyada Sacuudi Carabiya, waa waddan ku yaal Galbeedka Aasiya. Waxay ku baahsan tahay inta badan Jasiiradda Carabta, oo leh dhul baaxaddiisu dhan tahay 2,150,000 km². Sacuudi Carabiya waa dalka ugu weyn Bariga Dhexe, waana dalka labaad ee ugu weyn dunida Carabta.
Dalxiiska waxaa loo arkaa aragti casri ah oo koritaan cusub ah.
Wasaaradda Dalxiiska ayaa ku dhawaaqday in Boqortooyada ay albaabada u furtay dalxiisayaasha ajnabiga ah isla markaana ay ka qaadday joojinta gelitaanka dadka haysta fiisaha dalxiiska laga bilaabo Ogosto 1, 2021
Boqortooyada ayaa si weyn u maalgelinaysa dalxiiska. Qofka ka dambeeya aragtida dalxiiska waa wasiir leh maskax dhab ah oo caalami ah, Mudane Mudane Axmed Aqeel AlKhateeb.
Waa Wasiirka Dalxiiska ee Sucuudiga. Wuxuu leeyahay waayo -aragnimo ka badan 25 sano xagga adeegyada maalgashiga iyo maaliyadda, muddadii uu aasaasay, maamulay, dib -u -habaynna ku sameeyay dhowr hay’adood iyo shirkado dawladeed. Wuxuu caan ku yahay kartida uu u leeyahay inuu hoggaamiyo isbeddellada hay'adaha iyo inuu ku gaaro himilooyinka mustaqbalka si hufan oo wax ku ool ah.
Hadda, wuxuu hayaa jagooyinka
Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha Hay'adda Dalxiiska ee Sucuudiga.
Guddoomiyaha Golaha Agaasimayaasha Sanduuqa Horumarinta Dalxiiska.
Guddoomiyaha Guddiga Tayada Nolosha
Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha Sanduuqa Horumarinta Sucuudiga
Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha Warshadaha Militariga Sucuudiga (SAMI).
Xoghayaha Guud iyo Xubinta Guddiga Agaasimayaasha ama Maamulka Horumarinta Albaabka Diriyah
Xog -hayaha Guud iyo Guddoomiye ku -xigeenka Guddiga Agaasimayaasha Magaalada New Jeddah Downtown
Xubin ka mid ah Guddiga Agaasimayaasha Sanduuqa Maalgashiga Dadweynaha.
Xubin ka mid ah Guddiga Agaasimayaasha Ururka Guud ee Warshadaha Ciidan.
Xubin Golaha Dhaqaalaha iyo Horumarinta.
Xubin ka mid ah Guddiga Agaasimayaasha Shirkadda Neom.
Xubin ka tirsan Guddiga Agaasimayaasha Shirkadda Horumarinta Badda Cas.
Xubin ka tirsan Guddiga Agaasimayaasha Sanduuqa Horumarinta Qaranka.
Maalgashiga qaybta dalxiiska waa mid ka mid ah tiirarka Hiigsiga Sucuudiga ee 2030 iyo caddaynta joogtaynta si loo sii socdo si loo xaqiijiyo himilooyinkeeda iyo himilooyinkeeda:
Tan waxaa ka mid ah:
Maalgashiga qaybtu wuxuu gacan ka geystaa abuurista fursado maalgashi oo faa'iido u leh maalgashadayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye.
Uma tixgelinno dalxiiska kaliya darawal u ah kobaca dhaqaalaha, laakiin sidoo kale buundada isgaarsiinta dhaqanka ee adduunka, taasoo kor u qaadi karta heerka fahamka iyo ixtiraamka wadajirka ah.
Dalxiisku waa mid ka mid ah qaybaha ugu kobaca badan adduunka. Sideedii sano ee la soo dhaafay, waaxda dalxiiska ayaa si balaadhan u ballaarisay taasoo ka badnayd celceliska caalamka.
Marka loo eego tirakoobka Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka, waaxdu waxay ku biirisaa ilaa boqolkiiba 10 waxsoosaarka guud ee gudaha (GDP).
Sanadkii la soo dhaafay, heerka kobaca dalxiiska wuxuu taagnaa 3.9 boqolkiiba, halka dhaqaalaha adduunka uu gaaray 3.2 boqolkiiba.
Waxaa la filayaa in waaxda dalxiiska ay koraan 3.7 boqolkiiba marka la gaaro 2029, taas oo wax ku biirin doonta in ka badan $ 13 bilyan dhaqaalaha adduunka oo u dhiganta 11.5 boqolkiiba GDP -ga adduunka.
Waaxda dalxiiska waxay taageertaa 319 milyan oo shaqo oo adduunka oo dhan ah - taas oo ah mid ka mid ah 10 -kii shaqo ee adduunka oo dhan - waxayna mas'uul ka tahay inay hal shaqo ka abuurto shantii shaqo ee la bixiyay shantii sano ee la soo dhaafay.
Heerka caalamiga ah, waaxda dalxiiska ayaa loo tixgeliyaa inay tahay tan ugu ballaadhan iyada oo ay ka qaybgalaan saamiga ugu weyn ee dhallinyarada iyo haweenka marka la barbar dhigo tirada guud ee shaqaalaha.
Waxaa socda shaqo lagu hormarinayo kaabayaasha iyo adeegyada ugu waaweyn ee Boqortooyada iyadoo ujeedadu tahay in la daboolo baahida sii kordheysa si waafaqsan istiraatiijiyadda dalxiiska ee Boqortooyada:
- Wadar ahaan 150,000 qol hoteel ayaa la dhisi doonaa saddexda sano ee soo socota. Boqolkiiba 70 hoteelladaan waxaa fulin doona waaxda gaarka loo leeyahay.
- Boqortooyada oo kaashaneysa maalgashadayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajnabiga ah iyo lacagaha maalgashiga maxalliga ah, oo ay ku jirto Sanduuqa Horumarinta Dalxiiska, waxay dooneysaa inay ka dhisato 500,000 qolal huteel oo ku baahsan Boqortooyada marka la gaaro 2030 -ka.
- Dhowr isfaham oo is -afgarad ah oo wadar ahaan qiimahoodu kor u dhaafayo 115 bilyan oo riyaal Sacuudi ah ayaa la saxiixay si loo hagaajiyo kaabayaasha iyo in la kordhiyo tirada qolalka huteel ee la heli karo.
- Boqortooyadu waxay doonaysaa inay kordhiso awoodda nuugista garoomada diyaaradaha Boqortooyada in ka badan 100 milyan oo rakaab ah sannad walba.
Wakhtigan xaadirka ah ee wajahaya Sacuudi Carabiya:
Hoos u dhaca dhaqaale ee uu sababay masiibada ayaa si weyn u saameeyay waaxda dalxiiska, gaar ahaan waaxaha duulista iyo hoteellada.
Hoos u dhaca rakaabka 26 milyan.
Waxaa jira 200,000 oo shaqooyin ah oo ay saameysay waaxda.
Boqortooyada ayaa soo bandhigtay dadaallo lagu taageerayo dhaqaalaha iyada oo la siinayo 120 bilyan oo riyaal Sacuudi ah.
Sacuudiyiinta qaybta ayaa ka faa'iideystay hindisaha lagu taageerayo mushaaraadka dowladda.
Boqortooyada ayaa billowday hindise lagu taageerayo mushaharka Sucuudiga ee qaybaha gaarka loo leeyahay oo qiimihiisu dhan yahay 9 bilyan oo Riyaalka Sucuudiga. Taageeradan ayaa sidoo kale beegsatay waaxda dalxiiska.
Fursad ayaa lagu bixiyay barnaamijka Ajeer si loogu kala faaiidaysto faa'iidooyinka xarumaha dhexdooda si loo xaddido waxyeellada.
Lacagihii la xiriira dalxiiska iyo degmooyinka ayaa la joojiyay.
Huteeladu waxay soo dhoweeyeen in ka badan 50,000 oo muwaadiniin ah oo ku soo noqday Boqortooyada iyagoo adeegsanaya hindisaha "soo noqoshada muwaadinka", halkaas oo lagu martigaliyay in ka badan 13,000 qolal hoteel muddo ka badan hal ilaa laba toddobaad.
Iyada oo ujeedadu tahay kicinta dalxiiska maxalliga ah, Boqortooyada ayaa bilowday Xilliga Xagaaga ee Sucuudiga oo daboolaya 10 goobood oo dalxiis oo dalka oo dhan ah.
Istaraatiijiyadda Dalxiiska ee Boqortooyada
Boqortooyadu waxay aqoonsatay istiraatiijiyadda qaran ee dalxiiska, taas oo muujisay khadadka ugu waaweyn ee himilada qaybta la jaanqaadaysa himilooyinka Hiigsiga Sucuudiga:
Waxaan hiigsaneynaa inaan kor u qaadno tabarucaadka waaxda dalxiiska ee GDP laga bilaabo heerka uu hadda joogo oo ah 3 boqolkiiba lana gaarsiiyo in ka badan 10 boqolkiiba marka la gaaro 2030.
Waaxda dalxiiska ayaa bartilmaameedsanaysa in la abuuro hal milyan oo shaqooyin dheeraad ah si loo gaaro 1.6 milyan oo shaqooyin ah waaxda dalxiiska marka la gaaro 2030.
Waxaan beegsannaa soo jiidashada 100 milyan oo booqashooyin gudaha iyo kuwa caalamiga ah sannad walba marka la gaaro 2030.
Boqortooyada ayaa billowday fiisaha dalxiiska bishii Sebtember 2019, halkaas oo muwaadiniinta 49 dal ay ku heli karaan fiisaha si elektiroonig ah, halka kuwa haysta fiisooyinka Mareykanka, UK iyo Schengen ay heli karaan fiisaha markay yimaadaan, iyo maaddooyinka dalal kale ay codsan karaan inay ku helaan fiisaha iyagoo booqanaya wakiilada Boqortooyada ee dalalkooda.
49 -ka dal ayaa u dhigma boqolkiiba 80 qarashka dalxiiska adduunka oo dhan waxayna martigeliyaan ku dhawaad ​​75 boqolkiiba kuwa raadinaya safaro dalxiis oo raaxo leh oo adduunka ah.
Maalgashiga Dalxiiska Fud
• Maxay yihiin hadafyada aasaasidda Sanduuqa Maalgashiga Dalxiiska?
- Samaynta Sanduuqa Maalgashiga Dalxiiska ayaa ujeedadiisu tahay dhiirrigelinta maalgashiyada dalxiiska ee Boqortooyada, kala duwanaanshaha ilaha dakhliga, kordhinta kaalmada qaybta dalxiiska ee GDP, iyo abuurista shaqooyin badan oo loogu talagalay ragga iyo dumarka Sucuudiga ah ee qaybta dalxiiska, iyo sidoo kale gacan ka geysashada soo dhaweynta dalxiisayaal badan oo soo gala Boqortooyada iyadoo loo eegayo yoolalka istiraatiijiyadda qaranka ee dalxiiska iyo Hiigsiga Sacuudiga 2030.
• Waa maxay qalabka ay sanduuqa u adeegsan doonto maalgelinta iyo soo jiidashada maalgelinta dalxiiska?- Sanduuqa Maalgashiga Dalxiiska waxaa lagu aasaasay caasimad dhan 15 bilyan oo Riyaalka Sucuudiga. Sanduuqa ayaa sidoo kale heshiis isfaham la saxiixday bangiyada maxalliga ah si loogu maalgeliyo mashaariicda dalxiiska ugu yaraan 150 bilyan oo riyaal Sacuudi ah.
Sanduuqa oo kaashanaya bangiyada maalgashiga, ayaa aasaasay lacago lagu maal -geliyo waaxyaha kala duwan ee dalxiiska.
• Waa maxay fursadaha maalgashi ee sanduuqani bixiyo?
- Mid ka mid ah himilooyinka ugu muhiimsan ee sanduuqan ayaa ah in la taageero lana dhiirigeliyo maalgashiga dalxiiska ee Boqortooyada.
Dareenkan, sanduuqgu wuxuu si toos ah u furaa dhinacyada iskaashiga maalgashadayaasha iyada oo la siinayo taageero wax kasta oo la xiriira mashaariicda dalxiiska oo horseedi kara horumarinta qaybta dalxiiska ee aagagga kala duwan ee Boqortooyada, oo ay ku jiraan beero kala duwan, sida hoteellada, maqaayadaha iyo horumarinta goobaha dalxiiska, soo dhaweynta guud ahaan iyo qabanqaabiyayaasha safarka.
Sanduuqa ayaa sidoo kale doonaya inuu jawi maalgashi ka dhigo mid soo jiidasho u leh waaxda gaarka loo leeyahay oo u fidiya taageeradooda si ay u helaan qorshayaal faa'ido badan leh, kuwaas oo abuuraya fursado maalgashi oo waaweyn gudaha Boqortooyada iyada oo dib -u -habayn lagu samaynayo goobta dalxiiska si waafaqsan istaraatiijiyadda qaranka ee dalxiiska.
Intaa waxaa dheer, maaliyaddu waxay ku raaxaysataa doorka ugu weyn ee horumarinta warshadaha dalxiiska guud ahaan iyo kicinta badan
Ragga iyo dheddigga Sucuudiga si ay uga qaybqaataan waaxdan iyada oo ujeeddadu tahay in la siiyo hal milyan oo shaqo oo cusub marka la gaaro 2030, marka lagu daro kordhinta tabarucaadka qaybta dalxiiska ee Boqortooyada Boqortooyada Boqortooyada Midowday ilaa 10 boqolkiiba marka la gaaro 2030 marka loo eego heerka ay hadda ka tahay 3 boqolkiiba, iyo qorshaynaya inay helaan 100 milyan oo booqasho dalxiis ah.
• Maxay yihiin xalalka maaliyadeed ee sanduuqani bixiyo?
- Maaliyaddu waxay taageertaa waaxda gaarka loo leeyahay iyada oo la siinayo amaahda maalgashiga, iyo sidoo kale maalgelinta mashaariicda iyada oo la leeyahay saamiyada qorshayaashan. Sanduuqa wuxuu kaloo bixiyaa dammaanad mashaariicda qaarkood.
- Waxa kale oo mararka qaarkood la siiyaa taageero mashaariicda kala duwan iyo kuwa hormuudka ah iyada oo la siinayo dhammaan xalalka aan soo sheegnay. Sanduuqa, oo la kaashanaya hay'adaha dawladda ee ay khuseyso, wuxuu gacan ka geystaa bixinta dhulal loogu talagalay mashaariic muhiim ah oo muhiim ah.
Websaydka Sanduuqa Horumarinta Dalxiiska